Sida la isku jecleysiiyo Gabar... 4-taan qaab ee muhiimka ah xasuusnow mar waliba - Aayaha
Aayaha editorFebruary 10, 2019
Waxaan idiin soo gudbineynaa 4 talo oo kaa saacidaya in gabar aad ka dhigto mid ku rabta.
Noqo mid isku kalsoon oo daacad ah
Haweenka waxay ninka isku kalsoon ka arki karaan meel fog. Haddii aadan kalsooni isku qabin, xittaa ha weydiisan inaad damaashaad isku raacdaan sababtoo ah ma ay rabto. Waxay rabtaa qof u istaagi kara una hadli kara naftiisa haddii loo baahdo. Qof masuuliyad dusha u ridan balse ma rabto nin hadhoow naftiisa la baxsada.
Nin isku kalsoon waa mid u hadli kara si ay la hubo, ma ahan mid jees jeesta, haddii aad wajiga ka jeedsato taasi waa calaamad daciifnimo ah, haweenka waa kuwo raba inay xiriir la yeeshaan nin wanaagsan oo ishuba balse ma ahan nin fulay ah oo wajiga ka jeedsanaya.
Furaha inaad noqoto qof isku kalsoon waa inaad hubiso naftaada; aragtidaada, fekerkaaga iyo waxaad aaminsantahay isla markaana aad ku dhegnaataa.
Noqo mid daryeela oo dareen uleh arrimaha la xiriira iyada
Wicitaanada taleefanka ama farriin qoraaleed aad u dirto gabadha aad rabto waa mid micno weyn sameyn karta. Ha sugin inaad u tagto oo aad kadib xaaladeeda weydiisid, wac ama farriin qoraal u dir si aad xaaladeeda u ogaato, isku day inad ogaato xaaladaha kusoo kordha nafteeda haddii loo baahdana gacan taageero siiyo.
Inaad u muujisid dareenkaan dhabta ah iyo daryeelka caafimaadkeeda guud ayaa sababi doonta inay ku jeclaato isla markana aad boos weyn ku yeelato qalbigeeda sababtoo ah haweenka guud ahaan way qiimeeyaan daryeelka dhabta ah.
Ka taxadar inaad u jab jabot adigoo tusaya dareen iyo daryeel dhab ah; ogoow inay xad leedahay.
Tusi xoogaa hammi ah
Haweenka waa jecelyihiin ragga hammiga leh, waa kuwo aad u xiiseeya ragga leh horusocodka una ooman guusha.
Qorsheyaal usameey naftaada oo ku dadaal sidaad uga dhabeyn lahayd, haddii ay haweeneyda aragto inaad tahay nin hammi leh iyadaa kusoo raadsan doonta si ay qeyb uga noqoto noloshaada.
Noqo mid labista
Ma ogi haddii aad taas la socto, balse maalmahan haweenka waxay jecelyihiin ragga labista, ugu yaraan isqurxi oo labiska yar ee aad heysato ha noqdo mid aad hagaajisay. Ogoow dharka nooca markaas socda, oo iibso.
Uma labisan kartid sidii inaad ku jirtid 80-meeyadii, oo la soco in haweenka qarniga 21-aad aad soo jiidaneysid— si kastaba noqo mid labista.
Xittaa haddii aad qurxantahay balse aadan si wanaagsan ulabisan fursadahaaga wali waa kuwo xadidan.
Talooyin Kaa Caawinaya Inaad Ilaaliso Guurkaaga Kana Dhigto Mid Guuleysta
Your partner is more likely to cheat if they have these jobs
7 Farriimood Oo Aad U Macaan Oo Uu Ninkaaga Jeclaan lahaa Inuu Kaa Helo
Daawo: Ragga Farsamooyinka Layaabka leh ku shukaansada Hablaha Muqdisho (Qosol & Qaraaxo)